February 2019 – Page2– Department of Medical Service
http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/antibiotic-guidlines-2019-north-okkalapa-general-teaching-hospital ... Read More | Share it now!
http://mohs.gov.mm/Main/content/publication/%E1%80%99-%E1%80%99-%E1%80%80-%E1%80%9A-%E1%80%90-%E1%80%84-%E1%80%85%E1%80%99-%E1%80%9E%E1%80%95-%E1%80%94-%E1%80%84-%E1%80%9E-%E1%80%9B%E1%80%84-%E1%80%9E-%E1%80%80%E1%80%84-%E1%80%86 ... Read More | Share it now!
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ခု၊ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် Implementation Research၊ Clinical Research နှင့် Public Health Research များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ရန်အတွက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း (၁,၅၀ဝ) ခွဲဝေရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ သုတေသနရန်ပုံငွေများကို စနစ်တကျ စိစစ်ခွဲဝေအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် သုတေသန အဆိုပြုလွှာများကို စစ်ဆေးသုံးသပ်၍ ကနဦးရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် “သုတေသနအဆိုပြုလွှာ ကနဦးစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့” ကို (၁၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၁/၂၀၁၈) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍... Read More | Share it now!
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇)ရက် ရှေးဦးစွာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာထွန်းမြင့်က – • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးဌာန (၂၉)ခုနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန (၉၁)ခုတို့တွင် ဆီးချိုနှင့် သွေးတိုးရောဂါစစ်ဆေးကုသမှု ဆေးပေးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုနှင့် အခြေခံကျန်းမာရေးပညာရှင်များကို သင်တန်းများ အကြိမ်ကြိမ်ပေးအပ်၍ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု များကိုလည်းကောင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊... Read More | Share it now!
Posted on February 24, 2019 by user
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးသန်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း၌ မြင်းခြံပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြင်းခြံပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ သုခိတာ သားဖွား၊ မီးယပ်နှင့် မွေးကင်းစ ကလေးကုသဆောင် (၃) ထပ်အဆောက်အဦသစ် လှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့... Read More | Share it now!